Galaxy Tab S5e: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Shirkadda Samsung ayaa si lama filaan ah u soo bandhigtay kiniinkeeda cusub. Kani waa Galaxy Tab S5e, kiniin cusub oo u muuqda naqshaddiisa xarrago leh, marka lagu daro kala duwanaanshaheeda. Sidan oo kale, sumadda Kuuriya waxay cusbooneysiineysaa noocyadeeda kala duwan ee kiniinnada sannadka 2019. Sidan oo kale, waxaa iska cad in keliya noocyadeeda taleefannada casriga ahi ay yihiin kuwa ay ku dhici doonaan isbeddello muhiim ah. Kiniinkan ayaa sidoo kale la socda waxyaabo badan oo cusub.
Samsung Galaxy Tab S5e waxaa lagu gartaa inuu yahay kiniin leh qaab khafiif ah oo fudud waxa sumadu u isticmaashay. Marka lagu daro la imaanshaha shaqooyinka loogu talagalay si dadka isticmaala ay ugu xirnaan karaan wakhti kasta. Waxaa sidoo kale loogu talagalay inay bixiso khibrada ugu fiican ee madadaalada.
Kiniin tayo sare leh, oo qaab casri ah leh oo loogu talagalay in lagu siiyo khibrada ugu fiican ee suurtogalka ah. Kala badnaan ayaa ka mid ah furayaasha qaabkan. Sababtoo ah iyada oo ay ugu wacan tahay awooddeeda caqliga leh, waxay u oggolaaneysaa adeegsadaha inuu ku xirnaado oo si hufan u shaqeeyo. Laakiin, mahadsanid shaashadeeda tayada sare leh, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku raaxeysato habka ugu wanaagsan ee madadaalada. Isku dhafka ugu fiican.
1 Sooc Samsung Galaxy Tab S5e
2 Galaxy Tab S5e: Samsung waxay cusbooneysiineysaa kiniiniyadeeda
Sooc Samsung Galaxy Tab S5e
Samsung ayaa noo reebaysa mid ka mid ah kiniinnadiisa ugu dhammaystiran illaa hadda. Kiniin badan, oo loogu talagalay dhammaan noocyada isticmaaleyaasha, oo ay si hufan ugu shaqeeyaan, marka lagu daro raaxaysiga firaaqada iyo madaddaalada wakhti kasta. Haboon haddii aad rabto inaad qaadato fasax. Waxay ka badan tahay buuxinta tilmaamaha. Kuwani waa qeexitaannada Samsung Tab S5e:
Faahfaahinta farsamada Samsung Tab S5e
Tusaale Galaxy S5e
Screen 10.5-inch WQXGA Super AMOLED oo leh 2560 x 1600 xalka pixel
Gacaliye 64bit Octa-core processor
Kaydinta gudaha 64/128 GB (Kordhinta microSD ilaa 512 GB)
Kaamirada gadaal 13 MP
Xuduudaha kala duwan Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4G + 5GHz VHT80 MU-MIMO Wi-Fi Toos ah Bluetooth 5.0
Tilmaamo kale Accelerometer Faraha Sawirka Sawirka Gyroscope Sensor Hall Sensor Hall Sensor RGB Sensor
Dekadaha USB3.1 (Nooca C) POGO Nooca-C isku xiraha dhagaha
Audio 4 Kuhadlaya AKG Dolby Atmos
Batariga 7.040 mAh oo leh lacag degdeg ah
Cabbirada 245.0 x 160.0 x 5.5mm
Peso Gram 400
Qiimaha 419 iyo 479 yuuro
Heer farsamo waxaan arki karnaa inay ka mid tahay ka dhammeystiran kan Summada Kuuriya ayaa illaa hadda naga tagaya. Isbeddelada iyo hagaajinta ayaa lagu sameeyay dhammaan dhinacyada, haddii la barbardhigo moodooyinka kale ee shirkaddu naga tagtay illaa hadda. Naqshadaynta Galaxy Tab S5e waa suurtagal waxa ugu horreeya ee la ogaado. Waxay dooratay shaashad immersive ah, oo ku fadhida 81,8% xagga hore. Waxay sidoo kale u taagan tahay inay ahaato mid aad u dhuuban, sidoo kalena fudeyd ah, marka la barbar dhigo moodooyinka kale ee cabbirkiisu yahay.
Shaashad ah qayb muhiim ah. Samsung waxay isticmaashaa shaashad Super AMOLED ah, oo leh saamiga shaashadda 16:10, oo leh dhinacyo aad u yar, kuwaas oo ah waxa gacan ka geysta abuurista khibraddan quus-gooska ah mar walba. Intaas waxaa sii dheer, waxay la timaadaa adeegga caymiska YouTube-ka oo bilaash ah 4 bilood. Taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha iibsanaya Galaxy Tab S5e inay ka eegaan waxyaabaha ugu fiican YouTube, YouTube Music iyo YouTube Gaming5 iyadoon xad lahayn oo qeexid la yaab leh leh
Sida nidaamka qalliinka wuxuu ku yimaadaa asal ahaan Android Pie, noocii ugu dambeeyay. Waxay u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay ku raaxaystaan ​​khibrada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee arrintan la xiriirta.
Galaxy Tab S5e: Samsung waxay cusbooneysiineysaa kiniiniyadeeda
Kiniiniga ayaa imanaya oo leh batari weyn, awood dhan 7.040 mAh. Bixinta degdegga ah ayaa sidoo kale lagu dhex daray, si aan u aragno sida tikniyoolajiyaddani waxay kasbatay joogitaanka suuqa. Intaa waxaa dheer, waxay siisaa dadka isticmaala madax-bannaani weyn, illaa 14,5 saacadood. Loogu talagalay si dadka isticmaala ay ula shaqeyn karaan walaac la'aan.
Mid kale oo ka mid ah riwaayadihii waaweynaa ee la yimid Galaxy Tab S5e waa Bixby 2.0. Bilo ayaa laga joogaa markii Sumadda Kuuriya ayaa cusbooneysiisay kaaliyeheeda, iyada oo horumar badan laga gaadhay hawlgalkeeda. Isticmaalayaasha kiniinkan waxay awoodi doonaan inay ku raaxeystaan ​​dhammaan howlaha cusub ee kaaliyahaan ku dhex jira. Waxay u oggolaan doontaa hab raaxo leh oo lagula macaamilo kiniinka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa xarun ahaan lagu xakameeyo dhammaan qalabka guriga ku xiran.
Qalabka sidoo kale waa lagama maarmaan kiniinkan cusub ee Samsung. Astaantu waxay dadka siisaa adeegyo taxane ah, kuwaas oo ay suurtagal noqon doonto in si fiican looga faa'iideysto. Waa suurtagal in la iibsado kumbuyuutar, oo loogu isticmaalo goobta shaqada, saldhigga lacag-bixinta POGO, iyo sidoo kale daboollo kala duwan oo lagu ilaaliyo mar walba. Qalabkani wuxuu raadinayaa inuu ka faa'iideysto kala duwanaanshaha weyn ee kiniinku bixiyo mar walba.
Maqalku had iyo jeer wuxuu ka mid ahaa qodobada daciifka ku ah kiniiniyada. Samsung waxay sameysay dhowr horumar oo waaweyn oo ku saabsan Galaxy Tab S5e. Maaddaama ay innaga tagayso a tayo wanaagsan oo maqal ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan Quad Speakers-ku. Waxay ku daraan tiknoolajiyad istiraatiijiyadeed oo otomaatig ah oo loogu talagalay maqal awood badan, cod dheer. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay faa'iidada ah inay la jaanqaadayso habka kiniinka loo haysto.
Dolby Atmos sidoo kale waa lagu dhex darayMarka lagu daro dhawaaqa AKG, kaas oo bixiya dhawaaq 3D ah oo dheellitiran iyo maqal xirfadeed dheellitiran mar kasta. Samsung ayaa sidoo kale soo bandhigtay barnaamijka 'Spotify' oo ka mid ah barnaamijyada sida caadiga ah loogu rakibo kiniinka. Waxa kale oo jira rukun bilaash ah oo bilaash ah illaa 3 bilood gudahood, loogu talagalay macaamiisha cusub. Marka waad dhageysan kartaa heesaha aad ugu jeceshahay waqti kasta.
Si aad u awoodo inaad ka iibsato Galaxy Tab S5e nooca Kuuriya, weli waxaan sugeynaa dhowr bilood. Samsung waxay xaqiijisay in suuqa laga bilaabi doono bisha Abriil. Bilaabista la sheegay waxay noqon doontaa mid caalami ah. Wixii adeegsadayaasha Spain xiiseynaya kiniinka, waxay awoodi doonaan inay iibsadaan iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Hadda, maqnaanshaha xaqiijinta rasmiga ah, waxay umuuqataa in qiimaha wuxuu noqonayaa 419 iyo 479 euro, iyadoo kuxiran qaabeynta la doortay. In kasta oo aynaan ogeyn inay kuwani noqon doonaan qiimihii ugu dambeeyay ee Spain. Dhawaan waa inaan helnaa xog la taaban karo oo ku saabsan arrintan oo ka timid astaanta.
Waxa aan ognahay waa taas Galaxy Tab S5e wuxuu soo saari doonaa seddex midab: madow, dahab iyo qalin. Badhtamaha Maarso ayay suurtogal noqon doontaa in la sii haysto. Si aad uga feejignaato wararka ku saabsan kiniinka, waad booqan kartaa Bogga ay Samsung ka sameysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Galaxy Tab S5e: Kiniiniga cusub ee Samsung